BAKAYLE THURINGIAN: SHARAXAADDA OF TARANKA, GAAR AHAAN CONTENT, QUUDINTA, TARANTA - XOOLAHA
Thuringian bakeyle: asalka, dhalashada, shuruucda daryeelka
Maanta waxaa jira in ka badan 80 nooc oo ah bakaylaha, oo ay ku jiraan ballaadhan, dhexdhexaad ah iyo cuf. Iyada oo noocyo kala duwan, waa adag tahay in la doorto noocyada taranka. Maqaalka waxaan kuu soo bandhigi doonaa mid ka mid ah wakiillada naadirka ah ee gabes - Boqorka Thuringian. Tixgeli waxyaabaha muhiimka u ah mawduuca, gaar ahaan quudinta iyo dabeecadda.
Caleemaha aan tixgelinnay waa la baddalay dhammaadkii qarnigii 19aad iyo horraantii 20aad. Waxaa loo yaqaan magaca meesha laga saarayo - gobolka Jarmalka ee Thuringia. Arzhents, Flandres, bakeyliyada Himalayan waxay ka qaybgaleen doorasho jilicsan.
Caanaha Thuringian waxaa loola jeedaa jihada hilibka xoolaha. Cabbirka wakiiladiisu waa yar tahay. Laakiin inta uu jirkuna yahay mid dumin, cufnaanta.
Miisaanka jidhka ee bakteeriyada Thuringian wuxuu gaaraa 3.5-4.5 kg. Marka la eego qiyaasaha bakteeriyada bakaylaha, tani waa miisaanka caadiga ah. Xayawaanku waxay leeyihiin madax yar oo sarreeya oo ballaaran, oo ku yaalla qoortan aad u gaaban. Dheguhu waa fareem, aan dheerayn - 10 cm oo dherer ah. Dhamaantoodna waa la soo koobay.
Waxaan kugula talinaynaa in aad barato sharaxaadda iyo astaamaha ku jira noocyada noocyada cayayaanka noocan ah ee bakteeriyada maqaarka ah sida Ober, New Zealand White, Ruushka Ermine, Gray Giant, Silver, Risen Gold, Poltava Silver, Rex, Belgian Giant iyo Vienna Blue.
Dhallaanka cusub, bakaylaha waxay leeyihiin dharka, dhogorta midabka leh. Sida ay u bislaadaan, dhibco madow oo madow waxay u muuqdaan maqaarka, gobolka gobolka, dhegaha, miskaha iyo dhinacyada. Indhaha waa bunni. Dhoobada waa dhuuban yahay, jilicsan oo siman oo taabasho leh, oo leh glitter. Dhererka timaha waa 3 cm. Nusqaadka ee bakaylaha waa dhexdhexaad ah dherer iyo murqo.
Dabeecadda, Thuringian roogu waa mid saaxiibtinimo, dabacsan, firfircoon. Sababtoo ah sifooyinkaas dalal yurub ah, xayawaankaas badanaa waxaa loo ruqeeyaa sidii xayawaan guri ku yaal.
Noocyada dayactirka iyo daryeelka
Thuringian wuxuu qabaa aan qabyo ahayn. Uma baahna xaalado gaar ah oo xabsi ah, quudinta. Haddii aad sameysid xaaladaha ugu raaxeysan ee bakteeriyada Thuringian, markaas filimku wuxuu noqonayaa ilaa 12 sanadood. Celcelis ahaan, waxay ku nool yihiin ilaa 8 sano. Kala duwanaanshaha koritaanka degdegga ah.
Wixii ah bakayle ah ee noocaan, qafis wuxuu ku habboon yahay 4-5 jeer ka weyn laftiisa. Maaddaama xayawaanku si firfircoon u shaqeynayo, waa inuusan ku habooneyn oo kaliya, laakiin sidoo kale si caadi ah ayey u guuraan. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in naqshaduhu ay jecel yihin inay is dejiyaan, iskuna xiraan dhererkooda.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo doorto qafis for bakaylaha iyo sida loo sameeyo naftaada.
Waa suurad wacan in dhererka qafisku uusan ka yarayn 60 cm, width - 60-70 cm, dhererka - 1 m. Meelaha qafiska ee dhowr qof ayaa loo xisaabinayaa iyadoo lagu saleynayo 0.15-0.20 mitir oo laba jibbaaran. m 1 xayawaan ah. Xaaladaha ugu wanaagsan ee dhalinyaradu waa unugyo ay ka soo baxaan shabakadaha. Dhererka unugyada noocan oo kale ah waa inay ahaadaan 2 illaa 4 m, width - 1 m, dhererka - 0.4-0.5 m. Gurigu waa inuu ka yimaadaa alaab tayo leh oo muddo dheer shaqeyn kara. Waxyaabaha hooseeya waxay dhaawici karaan caafimaadka xayawaanka. Way fiicantahay haddii qafisku alwaax yahay. Gurigu waa in lagu qalabeeyaa naas-nuujiyo iyo cabitaan ka samaysan alaabta dabiiciga ah.
Waa muhiim! Qalabkana waa in laga sameeyaa qoryo, laakiin maaha kuwa dhaadheer, sababtoo ah naqshadaha noocan oo kale ah waxay leeyihiin ur xoog badan oo xayawaanku ku xun yahay. Rinjiga guryaha hoyga waa mamnuuc. Maadaama ay uurku jecel yihiin in ay baqshiistaan ​​baqashada, waxaa jira halis weyn in rinjiga uu ku dhici doono xayawaanka xayawaanka ee xayawaanka iyo sumowga sunta.
Waa in lagu meeleeyaa meel gaar ah, oo leh dabaqa mesh. Feeders waa inay ahaato dhowr - - hay, quudin, dhir macdan ah. Helitaanka xannaaneeyayaasha iyo cabitaanka waa in la siiyaa mar walba. Qolka waa in lagu qalabeeyaa meel ay xayawaanku ka fariistaan. Straw waxaa loo isticmaalaa sida qashin, lakabka 10-20 cm.
Xaaladaha xabsiga iyo daryeelka
Xaaladaha ugu muhiimsan ee ilaalinta bakaylaha:
Heerkulka ugu hooseeya ee hawada qaansarradu u qaadi karaan waa -6 ° C. Ugu sarreeya waa +35 ° C Heerkulka ugu fiican waa + 12-18 ° C. Muddada qoraxda waa inay ahaataa ugu yaraan 17 saacadood. Qoyaanka hawadu - 60-70%.
Shuruudaha hawo-qaadashada ee xilliga qaboobaha: 10-15 cu. m / h halkii bakayle (hawo gaaban oo gaaban), xagaaga: 30-50 mitir oo cubicar. m / h mid kasta oo bakayle ah. Unugyada waa in la nadiifiyaa markay noqdaan kuwo sumaysan. Nadiifinta guryaha iyo qalabka lagu soo saaro 1 jeer bishiiba.
Waa muhiim! Kafaarada waa in la daboolaa ama dib loo habeeyo qorraxda tooska ah, maaddaama ay jiraan xaalado badan oo kulaylka kuleylka ah ee bakaylaha.
Mid ka mid ah xaaladaha muhiimka ah ee ilaalinta bakaylaha waa tallaal. Tallaalku wuxuu ka hortagaa cudurrada faafa ee cudurrada ugu caansan iyo ilaalinta daaqa caafimaad leh. Inkastoo ay carruurtu ku quudiyaan caanaha hooyada, caafimaadkoodu waxa uu ilaaliyaa difaaca dabiiciga ah, kaas oo loo sameeyay sababo la xidhiidha difaaca jirka ee gaarka ah ee ka kooban cuntada.
Video: Talaalka Talaalka Si kastaba ha noqotee, ka dib korniinka dhalinyaradu wuxuu bilaabaa inuu cuno cunto qaangaar ah, ka hor intaanay imaanin, oo aysan soo saarin jidhka si madaxbannaan. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la dhiso difaac ka dhan ah cudurrada caadiga ah ee tallaalka joogtada ah. Sida caadiga ah, talaalka waxaa la sameeyaa 1 jeer 6 bilood.
Tallaallada ugu muhiimsan waa:
ka hortagga cudurada fayraska fayraska;
ka dhanka ah myxomatosis.
Sidoo kale, xayawaanka ayaa laga tallaaley xummadda paratyphoid, pasteurellosis, infekshanada streptococcal. Dhakhtarka xoolaha ayaa la tallaali karaa ama, ka dib markii uu tilmaamihiisa cad, naas-nuujintu si madax bannaan.
Ma taqaanaa? Laydhka seexan indhahooda. Xaqiiqdu waxay tahay in ay aad u xishoodaan, sidaas darteed xiitaa inta lagu jiro hurdada oo aan si buuxda u seexan karin isla markaana isla markaaba toos ugu soo toosi kartaa naqshad kasta. Awoodda lagu hurdo hurdo qoto dheer iyo hurdo indhaha oo xiran waxaa lagu iibsadaa kaliya bakaylaha qurxinta oo ku nool xaalado raaxo leh oo ku yaal guri dabaq ah oo caadaysteen xaqiiqda ah inaysan khatar ku jirin.
Quudinta bakteeriyada Thuringian
Tilmaamaha quudinta ee wakiilada ka soo jeeda Thuringian ma kala duwan yihiin bakaylaha kale ee barxadda. Dadka qaangaarka ah waxaa la quudin doonaa 2-3 jeer maalintii, bakaylaha inta lagu jiro nuujinta iyo ilmaha bakeylaha ilaa da'da 2.5 bilood - 4 jeer.
Xaaladda ugu muhiimsan ee quudinta xayawaanka waa cunto quudin leh. Saldhigga cuntada ayaa ka kooban cuntada qudaarta. Cuntada xayawaanka waxaa la soo saaray tiro yar, sida fitamiinada iyo tan macdanta.
Noocyada bakaylaha way kala duwanaan doonaan iyadoo ku xiran xilli-xilliyeedka. Xilliga jiilaalka, quudinta waa in ay noqotaa mid nafaqo badan leh si ay xayawaanka u helaan tamar loo baahan yahay si loo ilaaliyo heerkulka jirka. Waqtigaan, waa mid aad u wanaagsan in lagu baro cunto quudinta cuntada ee cuntada.
Sidoo kale tirada iyo halabuurka quudinta waxay ku xiran tahay da'da iyo jinsiga ee bakaylaha, muddada koritaanka. Hoos waxaa ku yaal talooyin ku saabsan soo bandhigida liiska tusaalaha ee qofka 1aad ee xagaaga iyo xilliga qaboobaha.
Muddada horumarinta bakaylaha Cuntada Cagaaran, g Quudinta guud, g Saliid, foori, g
Fattening 700 70 1
Inta lagu jiro xilliga nasashada 600-700 30 1
Inta lagu jiro muddada laysku daro 800 40 1
Inta aad uurka leedahay 800 40-50 1
Inta lagu jiro nuujinta 1200 60-70 1,5
1-2 bilood jir 300 20 0,5
3-4 bilood jir 500 40 0,5
Da'da 5-7 bilood 600 55 1
Muddada horumarinta bakaylaha Hay, g Succulent quudinta, g Guuxa, g Saliid, foori, g
Fattening 150 500 80 1
Inta lagu jiro xilliga nasashada 150 150 40 1
Inta lagu jiro muddada laysku daro 150 200 55 1
Inta aad uurka leedahay 175 200 60 1
Inta lagu jiro nuujinta 200 300-400 85-90 1,5
1-2 bilood jir 50 100-150 35 0,5
3-4 bilood jir 100 300 50 0,6
Da'da 5-7 bilood 150 350 75 1
Marka quudinta xayawaanka leh noocyo kala duwan oo cunto ah, si ay dheefshiidkoodu u raaxaysto, cunto ayaa la siiyaa taxanaha soo socda: diirada, cuntada casiir leh.
Video: quudinta bakaylaha xilliga qaboobaha
Sidaas darteed, xilliga qaboobaha, quudinta waa in la joojiyaa hay, iyo xagaaga - leh cagaarka.
Waa muhiim! Si aan u waxyeeleynin caafimaadka xoolaha, waxaa si adag loo mamnuucay in ay siiyaan raashin ka kooban carbohydrates fudud, tusaale ahaan, macmacaanka, sonkorta, buskudka. Waxyaabahan ayaa si weyn u kordhinaya khatarta buurnaanta.
Ka dib marka koritaanka dhalintu ay gaarto 2 bilood, wiilasha iyo gabdhuhu waxay u qaybsan yihiin unugyo kala duwan. Qaan-gaarnimada jinsiga ah ee xayawaankan waxay dhacdaa illaa 4 bilood jir. Si kastaba ha ahaatee, waa la sameyn karaa marka miisaankiisu ka badanyahay 2.5 kg, haddii kale way adkaan doontaa in ay qaaddo oo dhaliso ilmaha. Lo'da bakaylaha ayaa dhici karta wakhti kasta oo sanadka ah.
Ka hor inta aan la gaadhin, shakhsiyaadka leh wax cillado ah ayaa la jabiyaa. Wixii la macaawin haweenku waxay u socdaan qafiska ragga subaxa iyo fiidkii. Kadibna waxaa dib loogu celinayaa gurigooda. Uurka wuxuu soconayaa 29-31 maalmood. Wakhtigan, bakayle ayaa la siiyaa quudin dhamaystiran oo leh maadada borotiinka oo sarreeya waxayna ku siineysaa biyo ku filan. Inta lagu jiro uurka iyo nuujinta, qiyaasta cuntada maalinlaha ah ee bunni waxay u egtahay sidan:
Cuntada cagaaran - 300 g;
Cunto karisasho - 40-60 g;
Cunto karis - 30 g;
cows khamri - 5 g;
saliidda kalluunka - 4 g;
hilibka iyo cuntada lafaha - 7 g;
faaruq - 3 g;
cusbo - 2.5 g
Xilliga qaboobaha, waxaa la siiyaa mashiinka alfalfa, digirta, bran, macdanta macdanta. Haddii taranka taranka la qorsheeyay, markaa waa inaad horay uga welweshaa qorsheynta qaybta la kala saaro ee ay haweenku siineyso dhalashada iyo quudinta ilmaha, dhirta boqoradda.
Waxay noqon doontaa mid waxtar leh si aad wax uga akhrido marka aad u ogolaan karto bakayle in la kariyo, muddada uu soconayo iyo sida loo go'aamiyo sonkorta ee bakaylaha, marka ay suurtogal tahay in la dhigo bakaytka ka fog ee bakayle, sida loo ogaado jinsiga ee bakaylaha, iyo sida loo quudiyo bakayle quudinta ka dib markii bakaylaha iyo sida loo quudiyo bakayle aan lahayn bakayle.
Tani waa naqshad sanduuq u eg, oo ku xiran dhinacyada oo dhan, oo leh godbeel yar oo leh dhexroor ah 15-18 cm iyo fur dabooli karo. Waxaa lagu rakibay qafiska bakayle. Waa inay abuurtaa xaaladaha ugu raaxaysiga ah ee hooyooyinka iyo carruurta - mugdiga, diirimaadka, fayoobaanta. Shuruudahaas ayaa lagama maarmaan u ah inay ka dhigaan bakaylka oo kali ah oo raaxo leh. Gudaha unugyada boqoradda waa inay noqdaan qashin ka buuxsan lakabka qaro weyn. Naqshadeynta waa in la daboolaa ama la qalabeeyaa kuleylka dheeriga ah. Qashin waa 6-12 carruur ah. Khamrigu waa dhoobo iyo indho la'aan. Waxay indhaha ku furaan maalinta 10aad. Mudo 3-4 toddobaad ah waxay cunaan caanaha hooyada. Mustaqbalka, billow inaad cunto.
Ma taqaanaa? Qalabka habka taranka ee bakaylaha ayaa u oggolaanaya inay qaadaan 2 xabbo oo ragga kala duwan isla waqti isku mid ah. Dumarka uurku ma laha jir. Waxay ka kooban tahay 2 gees, mid kasta oo ka mid ah kaas oo u furan hoosta, iyo 2 qoorta.
Ilaa iyo inta ay hooyada ku hayaan aalkolada hooyada, qashinka waa in si joogto ah loo beddelo waana in aaney soo gaarin qoyaan iyo dhoobo xad dhaaf ah. Haddii kale, boqolkiiba yaryar ee stock-ka yar ayaa ka badbaaday. Sidaa darteed, bakaylaha Thuringian waa xayawaan aad u qurux badan muuqaalka, leh maqaarka qiimo leh iyo hilibka dhadhan fiican leh.
Waxay yihiin kuwo aan qabin xaaladaha xabsiga iyo quudinta. Tani waxay ka mid tahay sumcadda ballaadhan ee midabada bakaylaha iyo maanta waa mid aad u yar. In Europe, sababtoo ah dabeecadda nabadda-jecel iyo tayada qurxinta, waxaa badanaa lagu hayaa xaaladaha degaanka.